Sanado badan, haddii aad doonayso inaad video gani maayo, oo aad loogu baahan yahay u gaar ah video camera, laakiin jeer dhaqaaqo. Phones ayaa awood u leh inay u qoraan dhaqaaqin images, Oo waan necbahay in ay tilmaamayso in badan oo iyaga ka mid ah sida video, sanado hadda, laakiin dhalashada Note 3 iyo asxaabtiisa ay deggan, aad haddeer haysatidna Qalabka telefoonada gacanta la faahfaahinta sare kartida video duubo badan hardware ugu dadaalka badan. Indeed, dushiisa waxa ay u egtahay in loo Adal ku saabsan alaabta semiprofessional sida 5d Canon ka mkIII u video saarka. Laakiin waa run ahaantii in fudud? Bal aan fiirino waxa ku lug leh filim kuwaas oo qeexa, 4K clip ah oo ku saabsan Fiiro Galaxy 3 ah.
Tallaabada ugu horreysa ee aad u baahan tahay inaad samayso si aad ugu ganaan movie ee 4K waa in la helo goobaha saxda ah ee Note ah. By default waxaa ku diiwaan at 1080p, sidaa darteed marka hore waxaad u baahan tahay si ay u tagaan tab video ee goobaha iyo bedelo video baaxadda si buuxda 3840x2160 xal.
Hadda lagu sameeyo, waxaa jira waxyaabo qaar ka mid ah in laga war hayo. Marka hore, 4K video kaliya la toogtay karaa in hab auto, sidaa darteed waa badan u fog sida fursadaha hal abuur tago, aad ayaa dhigay rikoor xallinta iyo saxaafadda. Marka labaad, oo ay tani tahay arrin mid weyn, ma jirto xasilinta video in 4K midkood. Taas ayaa ka dhigaysa rajo adag toogashada iyo u baahan tahay qorshe qaar ka mid ah, sidaa darteed waa inaad ka war xadeynta kuwii iyo in, Xararad, xallinta badan oo uga sii dari karaa dhaqdhaqaaq yar yimaadda marka toogtay runtii in iyaga xoogga saaraan on loo maqli karo.
Waxa kale oo xusid mudan in markii rasaasta 4K on Note ah, aad rabto in badan iftiinka, xaaladaha iftiin yar yahay natiijooyinku waxay noqon kartaa in ka yar aad rajeynayaa lahaa.
Iyadoo nasiib yar, waxaad la kulmi doonaa la video gaaban sida tan haatan ka .
Tafatirka aad footage
Hadda waxaad haysataa muuqaal, waxaad u baahan doontaa in ay wax ka bedel. Waxaa jira qalab badan oo sixiddiisa video footage halkaas, laakiin mid ka mid ah uu jecel yahay waa AndroVid Video Editor . Waxaa jira faa'iidada iyo khasaaraha oo dhan si fiican tifaftirayaasha Android ku salaysan, laakiin tani midkood dheelitirka fiican ii.
Sidaas, waxaad leedahay editor, oo aad leedahay aad clip, hadda waa maxay?
Tallaabada ugu horreysa waa in ay dajiyaan footage ah editor ugu soo galay. Halkan waxa aad ka jaftaa on icon filimka in la furo ilaa browser oo taga si footage aad dooratay.
Doorashada waxa ay u dajiyaan doonaa Androvid halkaas oo ay ku bilaaban doono ciyaaraha, kaliya si aad hubto in ay tahay mid sax ah!
Pausing loo maqli karo kor u soo Bixiyaa wax menu oo ugu sarreeya, sida aad ka arki karto, waxaa jira fursado badan, aynu isla eegno mid kasta si faahfaahsan.
Laga bilaabo bidix, ikhtiyaarka koowaad waa goo. Garaacista button in aad qaadataa in interface fudud sida aan ka arki kartaa, oo ka shaqeeya sidii si fudud.
Waa inaad u jiidi labada calaamadood in dhibcood meesha aad rabto in aad jar video ah, ka dibna ku dhuftay icon maqas ee xaq u sareeya oo interface ilaa keentaa.
Hadda waxaad dooran kartaa in aad dhawrtid soo xulay oo iska tuur, laakiin labada madax, ama sii darfaheeda iyo qayb dhexe iska tuur. Waxaa dhab ahaantii waa mid fudud in.
Next ilaa aan kala. Tani waa mid aad sida goo laakiin laakiin hal dhibic oo xul ah oo ku saabsan waqtiga video leeyahay. Meel walba oo aad meel waa hal dhibic, taas oo footage la jaro laba gooni ah video clips.
Kuwa laba qalab oo qalab darsanka waxaan eegi doonaa ka dib aad badan samayn karaa dhammaan tafatirka fudud ayaad jeclaan lahayd in la sameeyo qalab Android aad, laakiin waxaa jira halkan jira fursado kale.
Waxaa ku soo xigay la qabsado. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku qabsoomayn jir ah video, waxa ay si fudud waa arrin ah pausing loo maqli karo meesha aad rabto iyo garaacid button camera ah. Mar kale ku cidhiidhinaya qabsado ka dib markii kubad ku yiilleen socda qaadataa oo ay la socdaan, oo mar aad qabto wax yar waxaad ka qaadan kartaa mid ka mid ah oo si toos ah u dajiyaan sida aad wallpaper tihiin kuwo dooni ama ay wadaagaan warbaahinta bulshada iyada oo app.
5. Audio oo kaliya
Button ayaa audio waa cajiib muhiim u ah qaar ka mid ah muuqaalka, in in ka dhabayso clip soo galeen audio kaliya.
6. Ku dar Music
The Button Music Add kuu ogolaanaya in aad bedesho iyo qas audio clip ku qoran.
Waxaad dooran kartaa xoogaa yar oo cusub oo maqal ah, iyo qabsato mugga labada kuwan raadkaygay audio asalka iyo kuwa cusub sida aad u rabto, waa arrin casri ah oo xiiso leh in la arko ee wax soo saarka noocan ah.
Button qoraalka wuxuu kuu ogol yahay in lagu daro qoraalka galay aad clip, waxaad dooran kartaa inta uu le'eg yahay, midabka iyo meelaynta qoraalka kasta oo aad rabto oo dhan gudahood interface fudud ee hoos ku qoran.
Great u ku daray in qoraalada goobta iyo wixii la mid ah.
Mid ka xigta waa button saamaynta, qaar ka mid ah oo ka mid ah waxaa laga heli karaa oo keliya haddii aad leedahay version Pro of software ah oo soo jiidata lacag yar, version xorta ah ma aan fursadaha halkan inkastoo, weli waxaad u leedahay inaad doorato ee darsin ah ama si saamaynta ay ku jiraan Mirror, kaas oo la mid ah image, Sepia taasi waxay siinaysaa in jir fiirin sawir, iyo sidoo kale fursadaha in lagu daro isku dari kara, vignette ah, afaysto iyo wixii la mid ah. Fursado badan si ay u helaan hal abuur leh, iyo haddii aadan hubin, tallada ugu fiican waa in ay isku dayaan mid oo bal arag waxa ay u egtahay!
Beddelaan kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo masterpiece aad u dhameystiray kala duwan qaab, xal iyo tayada haddii aad rabto. Iyada oo xal ka 160p kor, Koox ka mid ah qaabab sida hoos ku arkay iyo doorasho saddex goobaha tayo leh waxaad ka heli kartaa dheelitirka kaamil ah size file iyo wax soo saarka codsiga kasta.
Doorashada tifaftirka, halkan waa button beddesha ka, taas oo kuu ogolaanaya in aad isku shaandheyn ku dhajisan ama video ah leh button hal, aad u faa'iido badan oo abuuri kara qaar ka mid ah waxyeelada aad u xiiso badan.
The badhamada final shaashadda tani waa ikhtiyaarka Share kuu ogolaanaya inaad si ay u isticmaalaan warbaahinta bulshada aad soo oogay in la qaybiyo aad video, iyo button info in aad siinaysaa qaab, xallinta, size, nooca file iyo mudada clip ee la doortay, button magaca ah in ogolaanaysaa inaad magaca faylka, waxtar leh haddii aad u saxar badan, iyo ugu dambayntii badhan delete haddii aad rabto in aad tirtirto.
Back to shaashadda weyn ee aan helno qalabka tafatirka ee ugu danbeysay ee app ah, iyo in uu yahay darsanka. Tani waxay ka wakiil yahay warqad clip ka icon yar, iyo sida abid waa mid fudud in la isticmaalo. Si fudud ka jaftaa ku darsanka, oo aad waxaa lagu soo bandhigay la shaashadda hoose.
Tubada icon filinka iyo waxa aad qaadataa in ka dooro wadahadal video ah, taas oo ah waxa aad, dooro clip ugu horeysay.
Tani waxay markaas u muuqataa dhexe, oo aad markaas ku dari kartaa video ah mid ka hor ama ka dib. Ku rid video kale ee meesha saxda ah, oo mar kale ku celin kartaa haddii aad rabtid, ilaa aad haysatid oo dhanba clips aad rabto in aad si sax ah. Kadibna waxa ay kaliya arrin laga faaiidaysanayo sax ah ugu xaq u sareeya inay idinku leeyahay waxaa lagu sameeyey, iyo app ku dhejiya doonaa clips aad wada idiin.
Iyadoo qalab kuwa ay tahay mid sahlan si aad xaalkaa footage cusub, waxa ay kala qaybsan tahay, waxaa dib ugu biiraan si ka duwan, oo wax kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay. Faalladaada ku dhaqaaqo ayaa ah nin aan si fudud.
> Resource > Samsung > Sida loo Fallaadha gan, oo Edit Video 4K ku Fiiro Galaxy 3